Deg deg:Kulankaan lagu mataaneenayey kooxda kubadda Cagta ee LLPP jeenyo iyo Antalia ee dalka Turkiga – idalenews.com
Kulankaan lagu mataaneenayey kooxda kubadda Cagta ee LLPP jeenyo iyo Antalia ee dalka Turkiga waxaa goobjoog ka ahaa Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane C/raxmaan Cumar Cusmaan (Injineer Yariisow).
Qaar ka mid ah Cayaartoydii hore ee kooxda LLPP Jeenyo ayaa ku tilmaamay in kooxda Jeenyo ay ka mid tahay taariikhda Soomaaliya, magac weynna ay ku lahayd dalka oo dhan.
Xog-hayaha Dowladaha Hoose ee Turkiga Haydarudiin ayaa sheegay in ay bilaabeen kor u qaadidda iyo iska dhaxgalka magaalooyinka Soomaaliya iyo Turkiga, dhowaanna uu booqan doono magaalooyin kale oo dalka ka tirsan.
Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska Saadaq Cabdullaahi Siraaji ayaa ayaa uga mahadceliyey dowladda Turkiga doorkeeda horumarinneed ee dib u dhiska dalka iyo soo nooleynta adeegyada dadweynaha.
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisoow) ayaa sheegay in si ramsi ah loo dhaqangeliyey iskaashiga dowladda Hoose ee Muqdisho iyo dowlaha hoose ee Turkiga.
Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa boggaadiyey dedaalka dowladda Turkiga ee ku aaddan dib u dhiska Soomaaliya, isla markaana laga wada shaqeyn doono sidii looga dhabbeyn lahaa heshiisyada iyo ballan-qaadyada u dhaxeeya labada dal.
Gabogabada kulanka ayaa Qalab Isboortis la guddoonsiiyey kooxda LLPP Jeenyo, si loogu horumariyo tartamada ay ka ka qeyb-galeyso, maadaama ay ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee horyaalka kubadda Cagta Soomaaliya